“Matthijs de Ligt waa sida Zlatan Ibrahimović” – Mino Raiola – Gool FM
(Turin) 17 Luulyo 2019. Wakiilka caanka ah ee Mino Raiola ayaa ku sugnaa xarunta dhexe ee kooxda Juventus, kahor inta uusan xalay ka soo daganin Matthijs de Ligt Magaalada Turin, si uu kaga shaqeeyo jadwalka uu ku marayo daafaca reer Holand tijaabada caafimaadka.
Mino Raiola ayaa u sheegay saxaafada iyo guud ahaanba warbaahinta in Juventus ay sameysay heshiis weyn, maadaama la filayo in Matthijs de Ligt uu ka mid noqdo ciyaartoyda ugu fiican mustaqbalka.
Mino Raiola oo ka hadlayay xiddiga uu wakiilka ka yahay ee Matthijs de Ligt ayaa wuxuu yiri:
“Waa kan ugu fiican dhammaan ciyaartoyda da’ayarta ah, wuxuu u baahan yahay kaliya wax yar, si uu u cadeeyo inuu yahay kan koowaad”.
“Wuxuu diyaar u yahay inuu u wareego heer kale, wuxuu ku dhow yahay inuu gaaro heerka Pavel Nedvěd shaqo iyo maskax ahaanba, haddii uusan ka sii dheereyn doonin”.
“Heerka rabitaanka wuxuu i soo xasuusinayaa Zlatan Ibrahimović”. Ayuu hadalkiisa ku soo xiray Mino Raiola.
Yeelkadeeda, kooxda Juventus ayaa ugu dambeyntii ku guuleysatay inay gacanta ku dhigto saxiixa Matthijs de Ligt, kaddib markii ay si xoogan kula soo dagaalantay kooxaha Barcelona iyo Paris St Germain.